အက္ခရာများအိမ်ပြန် – Ernest Bevin ကောလိပ်
For Instructions on using Edulink click ဒီမှာ
သငျသညျပါတယ်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကောလိပ်ရုံးတယ်လီဖုန်းများက up to date ဖြစ်နေလည်းသေချာပါစေ 020 8672 8582
ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ to download the FAQs asasingle document
We do not haveafixed date, though it is likely to remain in place into 2021 အနည်းဆုံး. This will be determined by the success of the efforts to control the virus atanational and global level.
Students will arrive and sanitise or wash their hands. They will then walk to assembly or their teaching room for pastoral period. Students in years7ရန် 11 will have5lessons in that room for4days of the week. Break and lunch are staggered and only one group will be in the playground or serving area atatime. On their activity day students will move around the College to Games, DT and Computing.
The yellow tie and blue tie classes have been completely reorganised to create mixed ability groupings. The red ties were already in broadly mixed groups since changes were made last September. နှစ်တွင် 12 နှင့် 13 the tutor groups may reflect the courses taken or are mixed.
During the ‘Covid’ timetable students in years7ရန်9are taught in their mixed ability tutor groups. Students in years 10 နှင့် 11 are in groups which reflect their options and will be mixed ability in the main. In years 12 နှင့် 13 the students are taught in the subject classes, which have entry requirements. Once we revert to our planned timetable setting will restart.
ခုနှစ် 11 Results Day Information
ခုနှစ် 11 Information for Results Day on 20th August 2020
ခုနှစ် 13 Results Day Information
ခုနှစ် 13 Information for Results Day on 13th August 2020
ခုနှစ် 7-9 Families Letter 17th June 2020
ခုနှစ် 7-9 Letter to families 17th June 2020
ခုနှစ် 10 Return to School Letter 17th June 2020
ခုနှစ် 12 Return to School Letter 17th June 2020
Coronavirus မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ပံ့ပိုးမှု 2020
သာယာဝပြောရေးသတင်းလွှာမေလ ၁၁ ရက် 2020
Canvas အိမ်လေ့လာသင်ယူမှုမေလ ၆ ရက် 2020
မိဘများအတွက်နောက်ဆုံးသတင်း5မေလ 2020
နွေရာသီသက်တမ်းအဝေးသင်သင်ယူနှစ် 12 update 23nd April 2020
နွေရာသီသက်တမ်းအဝေးသင်သင်ယူနှစ် 12 update ကို 23 Aprilပြီလ 2020
နှစ်များအတွက်နွေရာသီအသုံးအနှုန်းဝေးလံခေါင်သီသင်ယူမှု 7-10 update ကို 22 Aprilပြီလ 2020
Wandsworth ကောင်စီမှမိဘများထံAprilပြီလ ၂၀ ရက် 2020
MYEd သည်မိသားစုများနှင့်ကောလိပ်တို့အကြားအဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကောလိပ်တွင်အရိုးစု ၀ န်ထမ်းများသာရှိသောကြောင့်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည် – ဒါကြောင့်ဖုန်းတွေယေဘုယျအားဖြင့်ဖြေကြားကြသည်မဟုတ်. နှစ်များ၏အကြီးအကဲများသည်မိသားစုများကိုတိုက်ရိုက်စာတိုပို့ခြင်းဖြစ်ပြီးပေးပို့လိုက်သည့်စာတိုများကိုတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်နိုင်သည်. Parents can also contact school via collegeclosure@ernestbevin.london which is monitored daily. ကျောင်းသားများသည်ဆရာများကို Canvas မှတစ်ဆင့်ဆရာများအားအကြောင်းကြားနိုင်သည်.
၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့် helpdesk လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်, ဤသည်အိုင်စီတီဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်.
ကျောင်းပိတ်ချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အားနည်းသောကျောင်းသားများနှင့်အဓိကကျသောအလုပ်သမားများ၏ကလေးများအတွက်ကောလိပ်ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ. ဤပြဌာန်းချက်သည်အီစတာနားမှ ဖြတ်၍ ပြေးသည်. သင်၏ကလေးသည်ဤအရည်အချင်းပြည့်မီသည်ဟုသင်ထင်လျှင် collegeclosure@ernbestbevin.london ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကျောင်းသားများအတွက်အခမဲ့အစားအစာများကိုဆက်လက်ပေးလျှက်ရှိသည်. အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုကိုကောလိပ်မှစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ကန ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်. ဘောက်ချာကို WONDE သုံး၍ မိသားစုများသို့တိုက်ရိုက်ပို့သည်. အားလပ်ရက်များမှတဆင့်အခမဲ့အစားအစာပြင်ဆင်ပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်သည်. တနင်္ဂနွေ နေ့မှစ၍ ဘောက်ချာများဖြန့်ဝေခြင်းကို EDENRED ဟုခေါ်သောအမျိုးသားစနစ်ကလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည် 20 ပြီလ. သင်၏အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပြီးသင်၏ကလေးသည်ယခုအခါအခမဲ့အစာစားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင် collegeclosure@ernestbevin.london မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန် Canvas ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်သည်. ဒါဟာအမှန်တကယ်သင်ကြားမှုကိုအစားထိုးလို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကဆရာ, ဆရာမအလုပ်တင်နှင့်လက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်, ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အလွန်ခက်ခဲသောဖြစ်စဉ်များကိုသင်ကြားရေး၌ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် 10 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. အဆိုပါကောလိပ်မတ်စောက်သောသင်ယူမှုကွေးသည်.
Canvas ကိုကောင်းစွာအသုံးချသည့်ထူးချွန်သောဥပမာများရှိသည်. နှစ်တွင် 11 ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျောင်းသားများစွာသည်သူတို့ပြုလုပ်နေသောတိုးတက်မှုကိုပြသနေသောအလုပ်များကိုတင်သွင်းနေသည်. သုတေသနအတွက်သူတို့ရဲ့အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်များပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်သွားခြင်းနှင့်ခက်ခဲသောအခြေအနေများနှင့်အလွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်.
Canvas ကို App ဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည် (ပတ္တူ – developer ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်) ၎င်းသည် WORD နှင့် PowerPoint အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအလုပ်ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းမှလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်. လက်ပ်တော့နှင့်ပီစီများလက်လှမ်းမီမှုအကန့်အသတ်ရှိသောအိမ်ထောင်စုများ၌၎င်းကိုအသုံးချနိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအားသူတို့၏အလုပ်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်မိသားစုများနှင့်အတူကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်.
ဤသည်မှာကျောင်းသားများအားလုံးအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်, ဝေးသူငယ်ချင်းများက, ကောလိပ်နှင့်သူတို့ပျော်မွေ့လှုပ်ရှားမှုများ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအားဖုန်းဖြင့်အထောက်အပံ့များဆက်ပေးသည်. သာယာဝပြောခြင်းအတွက်မိသားစုများကို MYEd နှင့်ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်သည်. ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏လုံခြုံမှုသို့မဟုတ်လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာရှိပါက DSL@ernestbevin.london သို့စာတစ်စောင်ပို့ပါ။.
ဒီအဆင့်မှာကောလိပ်ပြန်ဖွင့်မယ့်ရက်ကိုမညွှန်ပြဘူး. We are awaiting instruction from the government.
positiveပြီ ၈ ရက်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မိသားစုများအတွက်သိကောင်းစရာများ 2020
ကျောင်းသားများအတွက် Online Safety Letter 6ပြီ ၆ ရက် 2020
မိဘများအတွက် Online Safety Letter 6ပြီ ၆ ရက် 2020
မိသားစုများအတွက်သက်တမ်းနောက်ဆုံးအခြေအနေနောက်ဆုံး ၃ ရက် 2020
အခမဲ့ကျောင်းအစားအစာဘောက်ချာအစီအစဉ်3Aprilပြီ 2020
ခုနှစ် 7, 8 &9မူလစာမျက်နှာလေ့လာမှုပေးစာ 26 မတ်လ
တစ်နှစ်တာမှပေးစာ 7, 8 &9အိမ်မှာလေ့လာမှု၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိဘများ
ခုနှစ် 10 မူလစာမျက်နှာလေ့လာမှုပေးစာ 26 မတ်လ
တစ်နှစ်တာမှပေးစာ 10 အိမ်မှာလေ့လာမှု၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိဘများ
ခုနှစ် 12 မူလစာမျက်နှာလေ့လာမှုပေးစာ 26 မတ်လ
တစ်နှစ်တာမှပေးစာ 12 အိမ်မှာလေ့လာမှု၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိဘများ
ပြည်သူ့စာမေးပွဲဖျက်သိမ်းခြင်း update ကို 25 မတ်လ
တစ်နှစ်တာမှပေးစာ 11 & 13 တစ်ဦး updated အကြောင်းကိုအများပြည်သူစာမေးပွဲဖျက်သိမ်းမှုနှင့်အတူမိဘများ
က Canvas ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်း
က Canvas ပေါ်မှာအလုပ်ရှာဖွေတာနဲ့တင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းသားလမ်းညွှန်မှု
24 မတ်လအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်စာပို့အကြောင်းကိုကျောင်းသားများအတွက်လမ်းညွှန်မှု 2020
နှစ်ပေါင်း 7, 8 နှင့်9အိမ်မှာလမ်းညွှန်မှုကနေအလုပ်လုပ်နေ
နှစ်ပေါင်း 10 နှင့် 11 အိမ်မှာလမ်းညွှန်မှုကနေအလုပ်လုပ်နေ
ကောလိပ်ပိတ် 23rdMarch ကာလအတွင်းနေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုကျောင်းသားများအားညွှန်ကြားချက်များ 2020
စက်တင်ဘာလအတွက်ဆဌမ Form ကိုနေရာများကိုခွဲဝေချထားအကြောင်းကိုပေးစာ 2020
အများပြည်သူစာမေးပွဲဖျက်သိမ်းမှု၏အစိုးရကြေညာချက် 19 မတ်လအကြောင်းကိုပေးစာ 2020
မြေတပြင်လုံးကျောင်းပေးစာ 18 မတ်လ 2020
ဆဌမ Form ကိုပေးစာ 17 မတ်လ 2020
မြေတပြင်လုံးကျောင်းပေးစာ 17 မတ်လ 2020